Kufambisa moyo weWindows | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | General, Resources, Windows
Sezvandakakuudza nguva yadarika mune ino imwe posvo, imwe yenyaya dzinowanzoitika dzekukurukura munzvimbo yangu yebasa ndeye web browsers.
Nhasi ndanga ndichingotaura neimwe yeshamwari dzangu dzepamwoyo (uye mushandi pamwe chete) kuti chimwe chezvinhu zvandinovenga nezvePC yangu inyaya yekuti, kazhinji, pandinofanira kuita bvunzo ndinofanira kushandisa Internet Explorer panzvimbo pemamwe mabhurawuza ari nani («zvimwe kuruboshweNdinoziva kuti unovada sei»Akandiudza) seye safari kana wangu wekupedzisira akapamba iyo Google Chrome.
Chokwadi ndakaramba ndichiita nharo ndichimupopotera. IE, kune iyo shamwari yangu yakandiudza «zuva rimwe remabhurawuza ako rinotanga nekukurumidza kupfuura Explorer, rineisu tinopa mhosva… Uye aive akarurama. Ini ndaswera zuva ndichivhura mabhurawuza nguva dzese pandakanga ndichishanda uye ndinofanira kutaura kuti IE inonyatsotanga iyo inomhanya kwazvo, ichiteverwa Chrome :).
Ini zvakare ndakatanga kufunga ndikaona kuti yangu yekutanga nhanho diki kune software isiri yeMicrosoft ndakadaro pandaka downloader ndikaisa iyo Mozilla Firefox. Zvese kumberi, tichifunga izvo, kune vanhu vazhinji, kunyangwe nanhasi, iyo Internet iri chaizvo iyo Internet Explorer. Handifunge kuti ndinofanira kana kutaura kuti kwaive kuchinja kukuru, ndakadanana neiyo Firefox, uye ini ndaida kuridza icho chinotyisa browser kubva paPC yangu.
Asi ngativimbei: Internet Explorer yakava sei yakafanana neInternet?
Ngatione izvo Wikipedia inotiudza nezvazvo:
Windows Internet Explorer (Pamutemo Microsoft Internet Explorer, yakapfupikiswa MSIE) kazhinji inopfupikiswa IE ibhurawuza rewebhu rakaburitswa neMicrosoft yeWindows operating system uye gare gare Solaris Unix uye Apple Macintosh, maviri ekupedzisira akamiswa muna 2002 na2006 zvichiteerana. Microsoft yakashandisa mari inodarika $ 100 miriyoni (USD) pagore muma1990, nevanhu vanopfuura chiuru vachishanda kuIE muna 1000.
Ipapo zvinotsanangurwa zvakakwana. Internet Explorer is browser yeMicrosoft yakagadzirirwa Windows. Zvine musoro kuti, patinotanga kushandisa Windows PC, isu tinoshamwaridzana kubhurawuza webhu ne Explorer, zvine musoro.
Yakagadzirwa muna 1995 mushure mekuwana kweMicrosoft kodhi yekodhi yeMosesi, bhurawuza rakagadzirwa naSpyglass, ndokuzotumidzwa zita se Internet Explorer.
Tarisa kwauri, iwe, havana kuzviita ...
Iyo parizvino ndiyo inonyanya kufarirwa uye inoshandiswa zvakanyanya paInternet mubhurawuza pasirese, ichipfuura kwazvo makwikwi aripo, kunyangwe mamwe acho akawedzera mukuzivikanwa mumakore apfuura. Kuzivikanwa kwaro kunokonzerwa nekuti Internet Explorer ndiyo yepamutemo Windows browser, uye inosanganisirwa kubva kufekitori mune yakadaro sisitimu inoshanda. Kuva nehukama neWindows File Browser, hazviite kuti uninstall iyi application nenzira yakajairwa.
Vanhu ava vakanaka vari kuedza kundiudza chii? Internet Explorer haina kuiswa nekuti zvinoyevedza mumahwindo package, iri faibha yemoyo Mahwindo. Iyo yewebhu vhezheni yeiyo File Browser Mahwindo. Paunenge uchitsvaga pawebhu, iyo interface inosiyana (kunyanya menyu uye bhaa yekushandisa, zviri pachena) asi yakafanana chaizvo. Nekudaro, kushandiswa kwayo kune hushamwari.
Tinogona kutaura ipapo kuti Internet Explorer "yakasungirirwa" kuWindows. Hakuna mumwe asina mumwe. Kana zvirinani, hapana Windows inoshanda nemazvo isina kubatana Internet Explorer. Uye kugadzira kurerutswa. kana IE yakasungirirwa paWindows, uye isu takasungirirwa kuWindows ... Zvinonzwika sekudzvinyirira, handiti?
Usashandise, usatarise, usakurudzire, asi usazvidzime. Vacha rova ​​Windows mudumbu kana vachidaro, hongu ... asi ivo vachatofanira kushivirira pavanenge vachikava zvakare: razz:
Kunze kwekunge vaine iyo Windows yekuisa cd kudzoreredza sisitimu, seni.
LINKS: Internet Explorer paWikipedia (inonakidza kwazvo, ndinoikurudzira).
Mashoko emunyori: kunyora uku i100% yemahara kubva paInternet Explorer, yakanyorwa mushe uye chete uchishandisa Google Chrome: D.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Kufambisa moyo weWindows
hehe ... hove yebhabheri yanga ichipenga nguva pfupi yadarika. Ndatenda ninai nekumira nepasi, nekuverenga uye kutiwedzera.
Bagu, ndakakwanisa kugonesa musikana wangu nezve izvo. Iye zvino anoshandisa FF uye haana kugadzikana, asi haadi kubvuma kuti ndaitaura chokwadi.
Ini handizive kuti ndeipi vhezheni yeIE yavari kureva ... asi IE7 inotanga (uye zviri pachena inoshanda) inononoka kupfuura Google Chrome .. kana Firefox (ini ndinoisa semuenzaniso Sempron 2800 ine 512 ram, kana hp pavilion dv8000 Laptop). Pamwe IE6 inosimudza nekukurumidza zvakanyanya ... kunyangwe ini ndichifarira CTRL + T kuvhura iyo inotevera tebhu ine firefox yangu pane kuvhura CHIMWE uye CHIMWE uye CHIMWE hwindo muIE6.
hehe ndakarangarira chimwe chinhu chakaitika kuyunivhesiti kwandakadzidza, vakagadzira kamuri nyowani yemakomputa, uye vakaisa ubuntu pamakomputa ese, asi sezvo vazhinji vacho vaisaziva, vaitofanira kutumidza zita rekutanga vobva vaisa "Internet Explorer" it.
Iyi plugin haina nyowani sekududzira kuti icho chrome. Ini ndinofunga zvaive nekuti chrome inoshandisa ini handizive kuti chii cheSafari.
Wanga uine zuva rakabatikana kwazvo kubasa bachi, handiti? lol nguva yekuongorora!
Izvo zvinoita sahwira wako zvinoita sekunge ndeyekuti kunyangwe iexplorer inotanga nekukurumidza kupfuura chero imwe pane Windows system, ndiyo iri kunonoka kupa mapeji. Zvisinei nekuti inovhura zvishoma, kana gare gare ndichafamba zvishoma nezvishoma pane chero imwe inondiudza kuti ndicho chakanyanya kubhurawuza.
Ichi ndicho chikonzero nei IE ichitanga nekukurumidza: YAKASUNGWA KUWINDOWS! Kana sisitimu yatanga, bhurawuza rinotakurwa! Chii chingaitwe kupokana nechimwe chinhu CHAKATOGADZIRWA mundangariro?
Kuti inogona kutakura nekukurumidza, asi imhaka yekuti chikamu chekodhi yacho yatove mundangariro, zvisinei, kana uchitsvaga inoramba ichienzaniswa nedzimwe.
Wese munhu wandinoratidza firefox anobva achinja browser yavo, uye anongoshandisa pazvinenge zvakakodzera nekuti iwo mapeji anoitirwa IE, semuenzaniso: mapeji eruzhinji kana vamiririri vehurumende kwaunofanirwa kuzadza mafomu kana kubvunza.
Nzira iyo inoparadzirwa ndiyo chete chikonzero nei iine kutonga pamusoro pemamwe mabhurawuza, haugone kuibvisa zvachose uye kana ukadaro, unorasikirwa nekushanda kana kuenderana nemamwe masayiti.
Ini ndinogona kutaura kuti ihwo huipi hunodiwa, unofanirwa kuva nahwo kuitira, izvozvi ndiri kushandisa safari uye kana ndikapinda hotmail account, zvimwe zvinhu zvarasika, asi handisi kuzoshandisa IE izvo, ini shandisa Firefox.
Huh? Ndiri kushandisa Google chrome paWine (Windows XP) kwete Safari 525.13 paMac OS X! (ndinoshuva dai ndaive ne mac)
Unogona kunge uri mukana, asi uri kudya mangani? Ini ndinoti ei hairatidze mapeji miriyoni maererano. Iwe unoita chengetedzo zvinotyisa izvo zvisingafungidzike. Iyo ndiyo yekutambisa yepamutemo yeavo vanodzidza kutyora chengetedzo yemuchina. Uye kwete izvo chete. Asi kana iwe ukatsvaga iwe unowana akawanda zvikonzero zvekuona kuti izvo zvinopesana nezvinotaurwa neshamwari yako. Ive nekuchenjerera, inogona kumushandira zvakanyanya. Asi kubva ipapo kune izvo zviri nani. Ini ndinofunga iko kukanganisa kukuru
Pa IE hapana zvakawanda zvekutaura, zvakashata asi nechishuwo, pa Chrome ndine chekutaura. Ndanga ndichiedza kwenguva yakareba kuti ndisashandise zvigadzirwa zveGoogle zvakanyanya, nzara yavo yedata inondityisa uye ndichiri kurangarira zvikanganiso zvakaitwa pakuvhurwa kwavo. Saka ini handidi kushandisa Chrome.
Iye zvino zvandakaverenga chirevo changu zvinoita kunge chaizvo MUTEMO. Zvakakodzera kutaurwa naStallman. : /
Welcome back Nitzunga !!!!
rima, ndinofunga pane zvimwe zviri pamusoro apa:
Ini ndoda kutaura nezvazvo uye ndinovimba hapana anondinzwisisa:
1. Google Chrome i "ndima" kubva kune "Ndewani iye" wepfungwa. Yakagadzirwa (inofungidzirwa) kuti 100% yeFree Software, ndiko kuti: chero munhu ane ruzivo rwakanaka rwekugadziridza anogona kusimudzira pasi pezita rimwe chete uye nekudaro achiwedzera maficha. Asi mubvunzo wekuti nei iri "vhesi" ndeyekuti kana iri Mahara Software uye yanga iri yakawanda kudarika mwedzi wapfuura kuti yakaenda ku "gore": Zvinoitika sei kuti pachine hapana vhezheni inogona kuiswa mune yakajairwa OS yeSL, Linux? Zvinoita sei kuti waini ishandiswe kuimhanyisa pamapuratifomu eUnix? Zvinogoneka sei kuti inongowanikwa chete kuMicrosoft kana Mac mapuratifomu kana zvirizvo vaifanira kunge vakaiburitsa kubva pazuva rekutanga zvakare reLinux? Izvo zvinhu zvisingatsanangurike, sezvisingatsanangurike (kunyangwe zvisiri zvakanyanya) ndezvekuti ZVESE zvigadzirwa zveGoogle kambani maBetas, uye havazombove maFinals. Asi inyaya yebhizinesi, kuchengetedza musika "uchiteerera uye ku" wakamirira Final, uye sezvo ini ndisinganyatsonzwisisa bhizinesi renyika, zviri nani kupfuurira kune mumwe wangu mubvunzo.
2. "IE inokurumidza." Zvakanaka, asi pano, kana isu tichida kunyatso, ZVAKANAKA kuomarara nehunyanzvi bvunzo, pamusoro pekuziva iyo "moyo" kana izvo zvakagadzirwa nemabhurawuza aya, isu tinofanirwa kuita bvunzo pamapuratifomu akasiyana uye neakasiyana mapurani. Kana iyi nhandare yangosimudzwa, ngatiisei mauto mukati tione kuti ndiani anokunda.
Pakombuta yangu ine Core 2 Duo, 2 GB gondohwe, OpenSUSE seOS, zvinotora 1,8 s kutanga Firefox. (yakatorwa ne stopwatch, zvitende kana kwete). Asi paPC yebasa (kubva kwandiri kunyora), iine Dual Core + 1 GB gondohwe, zvinotora yakareba 4 s., IE 2 s. uye Chorme 1,3 s. Ndosaka zvakakosha kuongorora izvo zvakagadzirwa nevagadziri, vashandisi, uye "neferms" seni vari nechitopu mumaoko.
Isu tinofanirwa zvakare kufunga izvo izvo vashandisi vari kutsvaga mubrowser, uye chinonyanya kufadza ndechekuti: Hatitombobvumirana. Vamwe vari kutsvaga kumhanya, zvisinei kuti bhurawuza riri kutumira Yakavanzika dhata kune server. Vamwe vanotsvaga kugadzikana uye chengetedzo, vamwe kuita munhu, vamwe havana hanya nekumhanya kwekutanga, asi kanganwa nezve kamwe kamwe kuparara kwe «Barquito-Web». Iko kune zvekuda uye zvekusada. Mune yangu chaiyo kesi, ini ndinosarudza kumirira hafu yechipiri kureba kuti ndivhure bhurawuza, kuigadzirisa sezvaunoda uye nekunakidzwa, kuve nekukurumidza uye nekukurumidza padanho rekufambisa, uye kwete "kushora" pandiri (asi zvakanyanya kubvunza kana mutauri aine account yeemail muGoogle uye Feeds Manager mukambani imwe chete, uye blog, uye ...)
3. "Wese munhu anoda Chrome." Chinhu chega chakandikwezva ndiko kushandisa kwayo zviri nyore, kubata kweMatepi seMunhu Maitiro kuBrowser, sarudzo ye «Ghost Browsing», uye (zviri pachena) kutanga kwayo nekukurumidza. Asi iyo BIG yekudzosera shure ndeyeiyo Isiri-Linux Tsigiro (kwandiri izvo isingaregererwe).
Uye ini ndichakuudza chakavanzika chidiki: Hupenyu hwakandidzidzisa pazviitiko zvakawanda kuti kubva murudo kuvenga pane nhanho diki.
Uye kana paine hondo dzeanoshanda masystem, wadii hondo dzemabhurawuza ...
Imwe neimwe inoshandisa chero chaunoda. Zvakare, pavari zvakanyanya, sarudzo inowedzera uye zvishoma Monopoly (kunyangwe iine Google ini handizive zvekufunga).
Uff, ndakawedzera… ndine urombo :(
@ bachi.tux: Hupfumi hwechinyorwa cheblogger chiri mune zvakataurwa. Uye kana iwo akanaka (seako) zvine basa rei kana akareba.
Esty: kugara ndichinyatso tarisa kune wese munhu ... ini handina kuvaisa nguva kubasa, kungoti Chrome payakabuda ndakanetseka kuzviitira kumba… ndinongova freek.
Vakafara vachirova iyo Explorer, how cool.
Ini ndanga ndichingozvimisikidza pachangu kutaura kuti (kune avo vaisaziva) IE chikamu cheOS uye, zvakashata zvakakwana, chikamu chisingabvisike cheWindows.
Pandaida kusunungura, ini ndaisaziva uye saka zvaive kwandiriwo.
Kana iwe ukandipa sarudzo, bhurawuza rangu randinoda chaizvo ndiro randiri kushandisa izvozvi, Konqueror. Asi pandinoshandisa Windows, ndinoshandisa Chrome ndisingazeze.
Iva wechokwadi, dai zvisiri zvekushayikwa kwematebhu, IE6 ingadai isina sooooo yakaipa ...
Ini ndakasiya maaccents muWindows, ndosaka vasipo. Kutsvoda kwemunhu wese
Zvakanaka, ndinofunga isu tinofanirwa kugumira chimwe chinhu .. Chrome haisati iri yeMac OS .. kana Linux ..
"Tinogona kutaura ipapo kuti Internet Explorer" yakasungirirwa "paWindows."
Enquistado ishoko chairo, uye kuti rinokurumidza kupfuura FF umm, ini handizive, handina kushandisa IE kwenguva yakareba, vakatotaura pamusoro, pamwe inokurumidza asi kubva ipapo kusvika ipapo zviri nani kupfuura FF ... ndiyo imwe nyaya.
Sezvandakaverenga muforamu, IE yakanakira chinhu chimwe chete, kudzikisa FF.
Ini ndichave mutsigiri wadhiyabhorosi, IE 6 yakandishandira zvakanyanya pandakanga ndichishanda nemudhara, handina kana kumboshinga kumuisira red panda paari. Hazvisi zvese zvakashata.
Ini ndinofunga kune akajairika mushandisi, usability, kugadzirisa (madingindira, nezvimwewo) uye kuvimba ndiyo hwaro hwesarudzo. Ini handikwanise kuvimba IE nekuti hapana anoziva kuti zvinoitwa sei (kunze kwaBill) uye kusagadzikana kwayo kuri kuwedzera kechipiri nechipiri. Pandinoda kuvimba software, ini ndinoteerera kune nyanzvi, uye kune akawanda eayo. Kana mumwe munhu akatsoropodza kana kudzivirira IE vanozviita chete kubva kune ruzivo rwevashandisi (uye kana kubva pane iwo maonero ivo vanofunga kare kuti zvakashata ...) nekuti ivo havazombokwanisa kuongorora kodhi yavo, asi pandinoverenga kushoropodzwa kwe firefox Ndinozvitora zvakakomba, nekuti mukuwedzera kune ruzivo rwevashandisi, kune vanhu vanogona kutaura nezve chimiro uye tekinoroji. Kufananidza hakusi kuenzana, zvakafanana hakusi kuenzaniswa.
Ndicharodza mazino egava.
kubvumirana zvachose bachi. tux, naLJ Marin uye nekesari
Kana muongorori akatanga nekukurumidza, zvinondiitirei kana zvichizobatika paunenge uchitsvaga, kumwe kucherechedza pese paunenge uchitsvaga zvimwe zvemukati mutsvaga kana uri kutarisira chimwe chinhu muhotmail nemuongorori inokukumbira kuti uise idex kudzora, kana zvichidikanwa nei
Iti @ '· $% $ && /) (,. Blos uye ndiregerere chirevo hachina kuiswa nekumisikidza uye iwe unofanirwa kutora iro benzi fafitera remaputi nguva dzese
Ndoziva kuti kamwe kamwe iko kupusa kwekutarisa kwandinoita asi undiudze kana iwe usingafungi kuti bhurawuza rako rinozviita maererano ne chrome, ndiri fan yezvimwe zvinhu muGoogle kunze kwebrowser yako, kunyangwe ndichifunga kuti panofanira kuve kusiyana
ndoizvo simba remahara software yekubatana pamwe nekusiyana cuztomization kunozorora pane
uye mukana wevose, zvikasadaro yaizove monopoly uye hudzvanyiriri
Kana ari muongorori, ini ndinongoshandisa iyo pandinoshanda pakugadzirisa mapeji ewebhu kuti ndione mashandiro arikuenda ikoko uye kuongorora mufananidzo wekupedzisira wemuongorori, zvimwe chete zvandinoita nemamwe mabhurawuza, icho chinhu chinofanirwa kuitwa nemutemo, iwe usamboziva kuti Zvichazoonekwa sei mune vamwe kana kana paine ruzivo rwasara, rwevamwe vese mune chako chimiro
Ini ndinofunga zvakafanana neye shamwari marin mutsvaga anongondishandira kurodha firefox. Kwaziso, rakanakisa peji :)
Yakanaka kwazvo blog, yekutanga, yakadzidziswa kuverenga ... Yatove mune yangu rss ...
Chaizvoizvo, IE haifanirwe kana kufananidzwa nemamwe mabhurawuza (Firefox, Opera, Safari, Chrome, Konqueror, nezvimwewo), inofanira kunge iri mune chimwe chikamu ... Zviri pachena zvakaipa mune zvese, kunze kwemapoinzi maviri anofarira: zvinotanga nekukurumidza mu win (xq yatotakurwa kare mundangariro; mu linux ine ielinlinux zvinotora nguva yakareba kutakura - kunyangwe kana waini iri kumusoro-) uye kune mapeji anongotaridzika nenzira kwayo mubrowser iyi (akawanda mapeji ehurumende, zvinova zvinosuwisa ) vakagadzira kuitira kuti vashande pairi chete ... Uye chokwadika, vanhu vakajaira, IE ndiyo yakasarudzika muenzaniso wevanhu vazhinji vanoshandisa izvo zvavanopihwa uye kwete kuyedza dzimwe nzira, nekuti ivo havangodi, ivo ndinoda kutarisa tsamba uye hapana chimwezve…
Kufananidza kune chinangwa kunoratidzira mumifananidzo zvayakataura (haisi chrome, asi inoshandisa imwechete webkit injini sa safari, saka inogona kufungidzirwa kuti ichafanana neiyi):
(uye izvo zvinofananidzwa ne ie7; ie6 zvaizopa mhedzisiro ine njodzi
sekutaura kwaNitsuga na master666, iyo chikonzero IE inotakura nekukurumidza ndeyekuti yatove mundangariro, kutambisa nguva pakutangisa system :)
chakanyanya kuipa ndechekuti vanhu vasinganzwisise zvakanyanya, tarisa pazvinhu izvi, sababa vangu chaivo! Hahaha
Ndakaisa chrome kubasa, asi yakarovera zvakanyanya uye yainonoka, saka ndakarega kuishandisa.
chinhu chakanakisa nezve yemahara software ndiko kusununguka kwesarudzo uye kuti kune zvakawanda zvakasiyana siyana zvekusarudza kubva
Ichokwadi zvaunotaura muchinyorwa. Asi IE ini ndinofanira kuishandisa kubasa, nekuti chokwadi chinoda izvozvo. Mukubvunza mafemu, kana iwe ukaita webhu kunyorera, ivo vanoda (chinhu chakakosha chinodikanwa) kuti chishande chinoshanda muIEE, sezvo iri iyo yakanyanya kufararira browser papasi. Zvino, kana ichifanira kushanda mune mamwe mabhurawuza, inosarudzika.
Zvekushandisa kwangu pachezvangu, ini ndinoshandisa Firefox kana Opera. Uye pachinzvimbo chekushandisa Windows Explorer, ini ndinosarudza Yemahara Mutungamiriri.
Imwe neimwe ine zvirevo zvavo uye inosarudza zvinoenderana zvakanyanya nezvavanoda, kuravira kana nzira yekushanda.
IE pakutanga yaigadzirwa sekopi yakashata yeNetscape, Netscape yaive bhurawuza iro rakatanga iyo Internet yatinoziva nhasi ... Tsvaga iyo Gwaro pane nhoroondo kana hondo, handirangariri zvakanaka, pamabhurawuza ... zvinonakidza chaizvo . Vanoratidza maitiro anonyadzisa eMicrosoft kurwisa vavengi vayo.
Zvakanaka, ini handizive nezve ma linuxers akatenderedza pano, asi ini ndinokuvimbisa kuti kushandisa IE (Explorer Kuedza) kubasa kunondityisa. Nenzira isiri hafu yenguva dzose. Opera, firefox kana iceweasel. Kwandiri chakanakisa (Konqueror inoita kunge inononoka kwandiri). Uye wajaira izvo, kuyedza kushandisa chimwe chinhu senge IE, icho chinotora nguva kurodha, chinopa matambudziko, hachina tabo, kana ukasagadzirisa kana kuchigadzirisa, haugone kuvhura rinopfuura hwindo rimwe ...
IE iyo kune chero anochida.
N @ ty, udza shamwari yako kuti kana yawana bhurawuza ine mashoma kushomeka, ndikuudzewo xD
Wakatogadzwa kuona zvakanaka ... izvo zvakare kuona yakaipa xD
Ndezvekuti hauna kupindura kwenguva yakareba
Aaaa !!!!!!!! …… .odneitne aroha !!!
@esty uye ffuentes: ndadzoka sei? ndakaendepi?
Ah haha, ndakanga ndisina zvakawanda zvekutaura ...
Uye pamusoro pekutaura kwangu kwakabuda muchinyorwa http://linuxadictos.com/2008/10/23/navegadores-y-performance/ !! : D
PS: Zvakanaka kwazvo nezve kuziviswa kwemashoko kune tsamba, vanogona kuzviita kana zvakafanana asi neRSS? Kutenda: D
@esty: haha ​​handisi kurega kuverenga nezveNitzunga xD
Kana mumwe munhu asina kucherechedza, verenga nick yangu kumashure (ndiNitsuga naNitzunga) uye iwe unozoziva kuti nei zvakadaro.
kukanganisa: panonzi paNitsuga naNitzunga ndaireva kuti ndiNitsuga HAPANA Nitzunga
Ndakaona kuti chikamu chakakosha chemawindows makore masere apfuura apo ini ndaive ndichiri kuchikoro uye nekukanganisa ndakanyora kero yewebhu mune dhairekitori mumhanzi wangu uye zvakanditora kuenda kune saiti ine shanduko diki diki pakuonekwa, zvakanyanya nhasi NaIE8, kuita zvakafanana kurovedza kunovhara iye anotsvaga uye kuvhura IE /
IE vs vamwe vese. Mavirusi anorwisa anotsvaga.exe haarwisane neGecko kernel. Chimwe chikonzero chekusashandisa IE :)
@ 36 Chokwadi, izvo zvakaitika muIE6 (kuti iro bhurawuza refaira rinova Internet Explorer kana ichipinda kero yewebhu), asi hazvichazoitika muIE7. Kana iwe uine IE7 kana yakakwira yakaiswa, iyo faira browser yakazvimiririra pane iyo browser uye haishandure asi inongovhura iyo itsva IE hwindo kana kero yewebhu yakapinda. Saka izvozvi MS haisisina chikonzero chekuti "chikamu chakakosha cheWindows" kuenderera kusanganisira IE neWindows.